Transistor: Bata uye Govera Bhizinesi Rako Podcasts Neiyi Podcasting Platform | Martech Zone
Mumwe wevatengi vangu anotoita basa rakanakisa pakushambadzira vhidhiyo munzvimbo yavo yese uye kuburikidza neYouTube. Nekubudirira ikoko, vari kutsvaga kuita nguva refu, kubvunzurudza kwakadzama nevaenzi, vatengi, uye mukati kuti vabatsire kutsanangura mabhenefiti ezvigadzirwa zvavo. Podcasting chikara chakasiyana kana zvasvika pakugadzira zano rako… uye kuitambira kwakasiyana futi. Sezvo ini ndichigadzira zano ravo, ndiri kupa muchidimbu nezve:
Audio - kuvandudzwa kwema intros, outros, uye kufona-kune-chiito iyo inogona kumhanyisa mupodcast.
Zvinoonekwa - kuvandudzwa kwemufananidzo wako wepodcast uye episodhi mifananidzo.
gutsikana - kuvandudzwa kwekarenda yemukati ine mazano ekusimudzira mibvunzo yepamusoro uye zvinonetsa zvine chekuita nechigadzirwa chavo. Izvi zvinosanganisira kurudziro dzevaenzi uye tsvagiridzo yebato rechitatu yekugovera.
nemitambo - podcast maseva akagadziridzwa kutenderera midhiya, saka kusarudza iri nyore kushandisa, yakasimba, yakavimbika, podcast hosting chikuva kunokosha pakubudirira kwako. Vamwe vanopawo vatambi vakanaka.
Kubatana -Wako anotambira anofanira kunge aine ese anodiwa ekugadzirisa ekudyara ekuita syndicate iyo podcast kugovera zvirimo pane podcast madhairekitori uye emuno mafoni mapuratifomu.
Analytics - Podcast analytics aggregate zvikumbiro kubva kune ako ese akagoverwa masaiti kudzokera kuchikuva kuti akuratidze zvakazara zvikumbiro uye anoteerera.
Aya maficha ndizvo chaizvo nei usingade kungoshandisa yako avhareji webhusaiti webhusaiti sevhisi kubata podcast yako. Kuwana yakakura podcast yekubata chikuva kwakakosha… uye isu tinoda Transistor!
Transistor inopa podcast hosting, syndication, uye analytics kuzviuru zvemasangano, mhando, uye vanogadzira pasi rese. Iyi puratifomu yakatangwa nenyanzvi podcasters vakaona mukana wekuvaka yakazara chikuva. Heino mhedziso yepuratifomu:
Zvinhu zvakakosha zvepuratifomu zvatinotenda zvinoita kuti ive yakasarudzika podcast hosting chikuva vari:
Unlimited Podcasts - akawanda mapodcasts anochaja pashoo imwe neimwe… neTransistor unogona kuve neakawanda mashoo sezvaungade pane ese emitengo yavo sarudzo.
Private Podcasts - mabhizinesi anowanzo kuda kugovera akavanzika podcasts uye Transistor inokutendera iwe kubata avo vanyoreri.
Yakavakwa-In Webhusaiti -hapana chikonzero chekuvaka imwe saiti yepodcast yako, yavo puratifomu ine yemukati manejimendi system inosanganisirwa.
Podcast Player - nyudza nyore nyore podcast inoridza pane mamwe masaiti… uye vanotsigira kugona kwe Twitter kunyudza mutambi mukati mezvako zve Twitter.
Kuwedzera kweAd Ad - kune izvo zvakakosha zvekufona-ku-chiito kana kuratidza vatsigiri.
Dzimwe Nhengo dzeChikwata - iva nechikwata chiri kushanda pakuburitsa show yako? Vawedzere sevamwe vashandisi paaccount yako.
Syndication Zvishandiso -Gadzirisa uye shandura podcast yako nemidziyo yavo yakamisikidzwa. Ivo vanotopa 1-tinya kutumira kuSpotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcast Addict, Breaker, Player FM.
Podcast Tsvaga Injini - 1-tinya submussion kuti Teerera Notes uye iyo Podcast Index.
Reporting - yakapfava, yakaunganidzwa kushuma kune ako ese anoratidza, episodhi zvinosanganisira kuteerera kwese.
Transistor ine mamwe maturusi ako ese akapihwa mune yakanaka mushandisi interface iri nyore kushandisa uye kuvhura podcast yako kubva.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we Transistor uye ndiri kushandisa yangu affiliate link muchinyorwa ichi.
Tags: apuroApple podcastsBreakergoogleGoogle Podcaststeerera manotsimutambi fmPodcastPodcast Muropapodcast kugoverwapodcast kubatapodcast indexpodcast reportpodcast yekutsvaga injiniPodcast syndicationspotifyspotify podcastsiyo podcast indextransistor